Morondava : Dahalo roa matin'ny Fitsaram-bahoaka -
AccueilSongandinaMorondava : Dahalo roa matin’ny Fitsaram-bahoaka
Morondava : Dahalo roa matin’ny Fitsaram-bahoaka
16/08/2018 admintriatra Songandina 0
Raikitra ny fifandonana teo amin’ny fokonolona sy ny dahalo nirongo basim-borona sy kalaky maromaro. Ny harivan’ny talata lasa teo tokony ho tamin’ny 5 ora hariva no nitrangan’izany, tany amin’ny Tanana antsoina hoe Marovoay kaomina Bemanonga distrikan’ny Morondava. Nandritry ny fanafihana dia raikitra ny fanarahan-dia nataon’ny fokonolona ka dahalo roa no azo sambom-belona, ary tonga dia niharan’ny hatezeram-bahoaka, rehefa avy nangalatra omby miisa 5 miampy ireo entana maromaro sy vola mitentina iray hetsy ariary no lasan’ireo dahalo. Antsasak’adiny taorian’io fanafihana io vao samy nivoaka ny tranony avy ny olona. Nisy no nanao antso vonjy rehefa hita fa foana ny vala. Ny vatan-dehilahy teo an-tanàna niaraka tamin’ny fokonolona manodidina ny fokontany voatafika no tonga dia nanara-dia ireo dahalo niaraka tamin’ny fitaovam-piadiana. Tamina tanàna kely iray tsy lavitra ity toerana nisehoan’ny fandrobana no nifankatratra ny roa tonta. Teo no nisian’ny fifandonana, ka jiolahy roa izay voalaza etsy ambony no azo sambom-belona nandritra izany, ary tonga dia notetehan’ny fokonolona tamin’ny famaky teo izy. Nitsoaka avy hatrany ilay dahalo iray rehefa nahita ny fatin’ny naman’izy ireo, fa ny omby kosa dia tafaverina. Afaka 15 minitra taorian’izany, vao tonga ny Zandary avy any.
Miaina ao anaty tebiteby tanteraka, araka izany, ireo mponina any an-toerana, satria efa mila ho isan-kerinandro ny asan-dahalo manao andiany manafika any amin’ny kaominina Bemanonga. Tsy nisy naratra na aina nafoy kosa tamin’ireo fokonolona nandritra ny fifandonana. Nankasitrahan’ny Zandary ny fihetsik’ireo fokonolona izay niezaka nahatafaverina amin’ny tompony ireo omby ireo. Mitohy ny fanadihadiana sy fikarohana ny iray tamin’ireo dahalo tafaporitsaka.